डा. केसीको सत्याग्रह स्थगन, संघर्ष जारी रहने - Sadrishya
डा. केसीको सत्याग्रह स्थगन, संघर्ष जारी रहने
काठमाडौँ, १८ माघ : चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै विगत २४ दिनदेखि अनशनरत डा गोविन्द केसीले आज आफ्नो अनशन अन्त्य गर्नुभएको छ ।
डा केसीले राखेका माग राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ ले सम्बोधन गरिसकेको भन्दै सरकारले पटकपटक अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो । यसअघि आजै पूर्वविशिष्ट व्यक्तिले डा केसीसँग भेट गरी अनशन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । (रासस)
काठमाडौं, माघ १८ :डा. केसीका अभियन्ता डा. अभिषेकराज सिंहका अनुसार डा. केसीले सत्याग्रह स्थगन गरेका छन् ।चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २४ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह स्थगित गरेका छन् । आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गर्दै अनशनमा बसेको भए पनि सरकारले उनलाई पेलेरै विधेयक पारित गराएको थियो ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित भएपछि डा. केसीलाई संघर्षको रुप फेरेर आन्दोलनमा होमिन चौतर्फि दबाब परेको थियो ।
शिक्षण अस्पतालका सफाइ कर्मचारी अमृत पुजारीको हातबाट डाक्टर के सीले जुस खाएर अनशन तोडेका थिए।